Militariga Soomaaliya oo howlgalo kula wareegay deegaano iyo saldhigyo ay Shabaab ku lahaayeen Sh/Hoose – Walaal24 Newss
February 12, 2018	1	By walaal24
Ciidamada Militariga Soomaaliya oo kaashanaya Kuwa AMISOM ayaa lagu soo warramayaa in maleeshiyaadka Alshabaab ay kala wareegeen deegaano iyo saldhigyo dhowr ah oo kuyaalay Gobolka Shabeelada Hoose.
Howlgalo ballaaran oo ay sameeyeen ciidanka Xoogga Dalka ayaa u suura gashey in ay Alshabaab ka qabsadaan deegaanada Awdheegle,Mubaarack,deeganka Daarusalaam,Deegaanka Malable iyo tuulooyin hoostag degmada Qoryooley ee Gobolka Shabeelada Hoose.
C/fataax Xaaji Cabdulle Guddoomiye kuxigeenka Gobolka SHabeelada Hoose ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in maleeshiyada Alshababa laga qabsady deegaano dhowr ah oo ay ku lahaayeen Gobolkaasi Shabeelada Hoose.
“Ciidanka Xoogga dalka ayaa maanta sameeyay howlgalo ballaaran,waxaana maleeshiyada Shabaab ay ka qabsadeen saldhigyo iyo deegaano dhowr ah,alle mahadii,waxaana socda weli howlgalo,ciidamada ayaa la hadlaya shacabka iyagoo ka codsanaya in ay is dejiyaan,een deegaanada laga qabsadey maleeshiyada Alshabaab waxaa kamid ah Mubaarakc Awdheegle,sidoo kale waxaa hawada ka baxday Idaacad afka Alshabaab ku hadlaysay oo ay ku lahaayeen Deegaanka Daarusalaan,way isaga carareen meel cirib iyo jaan ay dhigeen lama garan karo,ciidamaduna way ku raad joogaan”, Ayuu Yiri Guddoomiye C/fataax Xaaji Cabdulle.
Guddoomiye kuxigeenka ayaa mar aan weydiinay su’aal ahayd in uu faah faahiyo khasaaraha halkaasi lagu gaarsiyay Alshabaab ayaa sheegay in ay jiri karaan khasaarooyin,dhimasho dhaawac iyo dad laga qabqabto,balse markii ay howlgaladu soo dhamaadaan la xaqiijin doono kadibna ay soo bandhigi doonaan.
Madaxweyne Dani oo hadiyad gudoonsiiyay madaxweynayaasha Hirshabeele iyo Koonfur Galbeed
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaliya oo kormeer ku tagay dhowr Wasaaradood
Daawo: Ra’iisal wasaare Kheyre “dhibatada Qabiilka anan wax ka baran sodonkii sano la soo dhaafay waxa kow ka ah Aafad cusub ee dagalka Tukaraq ee nahortala”